ch 8 မာကု – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch 8 မာကု
8:1 ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, နောက်တဖန်အ, လူအုပ်ကြီးရှိစဉ်အခါ, သူတို့စားရန်ဘာမှရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, တပညျ့တျောတို့အတူတကွတောင်းဆို, သူတို့ပြောဆို:
8:2 "ငါသည်လူအစုအဝေးအဘို့အသနား, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, သူတို့သုံးနေ့ရက်ကာလအဘို့ယခုငါနှင့်အတူပါသည်းခံ, သူတို့စားရန်ဘာမှရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး.
8:3 ငါသည်လည်းသူတို့၏အိမ်သို့အစာရှောင်ခြင်းသူတို့ကိုပယ်ပေးပို့ခဲ့လျှင်, သူတို့ကလမ်းအပေါ်စိတ်ပျက်လိမ့်မယ်။ "သူတို့ထဲကအချို့ဝေးမှလာသည်.
8:4 တပညျ့တျောတို့ကလညျး, "ဘယ်မှာ မှစ. မည်သူမဆိုဤတော၌သူတို့အဘို့အလုံလောက်အောင်မုန့်ရယူပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်?"
8:5 ထိုမင်းသည်သူတို့ကိုမေးခွန်းထုတ်, "ဘယ်နှစ်ယောက်မုနျ့သင်ရှိသည်ပါဘူး?"ထိုသူတို့ကဆိုပါတယ်, "ခုနှစ်။"
8:6 ထိုမင်းသည်မြေပြင်ပေါ်တွင်စားရန်ကိုဆင်းထိုင်ဖို့လူအစုအဝေးညွှန်ကြား. ခုနစ်မုနျ့ငါးလုံးယူ, ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း, သူကသူတို့ရှေ့မှာနေရာနိုင်ရန်အတွက်ဖဲ့နှင့်သူ၏တပည့်များအားပေး၏. ထိုသူတို့ကလူအစုအဝေးမတိုင်မီထိုအထားရှိ.
8:7 ထိုသူတို့ကအနည်းငယ်သေးငယ်တဲ့ငါးရှိခဲ့. ထိုမင်းသည်သူတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, သူသူတို့ရှေ့မှာထားရှိခံရဖို့သူတို့ကိုအမိန့်ထုတ်.
8:8 ထိုသူတို့ စား. ဝကြပြီးမှ. ထိုသူတို့အပိုင်းအစများထံမှ leftover ခဲ့သောအရာကိုချီ: ခုနစျပါးခြင်းတောင်း.
8:9 နှင့်စားသုံးသောသူတွေအကြောင်းလေးထောင်ရှိသတည်း. ထိုမင်းသည်သူတို့ကိုပယ်ချ.
8:10 နှင့်ချက်ချင်းပည့်တော်တို့နှင့်အတူလှေထဲသို့တက်ပြီး, သူ Dalmanutha ၏အစိတ်အပိုင်းများသို့သွားလေ၏.
8:11 ထိုအခါဖာရိရှဲ ထွက်. သူ့ကိုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်စတင်, သူ့ထံမှမိုဃ်းကောင်းကင်ကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုရှာကြံ, သူ့ကိုစမ်းသပ်.
8:12 စိတ်ဝိညာဉ်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းညညျးတှားခွငျး, ဟုသူကပြောသည်: "ဘာကြောင့်ဒီမျိုးဆက်ဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုရှာအံ့သောငှါထားဘူး? အာမင်, ငါသည်သင်တို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်, သာဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုဤလူမြိုးအားပေးတော်မူလတံ့လျှင်!"
8:13 ထိုအခါသူတို့ကိုပယ်ရှားပေးပို့ခြင်း, သူသည်နောက်တဖန်လှေထဲသို့တက်, သူသည်ပင်လယ်ဖြတ်ပြီးသို့သှားကွ၏.
8:14 ထိုသူတို့ကပေါင်မုန့်ကိုယူခြင်းငှါမေ့လျော့. ထိုသူတို့ကလှေထဲမှာသူတို့နှင့်အတူမဆိုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, တဦးတည်းမုန့ မှလွဲ..
8:15 ထိုသူတို့အားညွှန်ကြား, ဟုဆို: "စဉ်းစားကြည့်ပါနှင့်ဖာရိရှဲတို့၏တဆေးကိုဟေရုဒ်မင်း၏တဆေးကိုသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်။ "
8:16 ထိုသူတို့ကအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူဤတှငျဆှေးနှေး, ဟုဆို, "ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမမုန့်ရှိသည်။ "
8:17 ထိုအခါယရှေု, ဒီ သိ., ထိုသူတို့အားပြောဆို: "သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့သည်နောက်မုန့်များကြောင့်ထိုသို့ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူး? သငျသညျမရသေးသောကိုသိရသို့မဟုတ်နားလည်ပါနဲ့? သင်ဆဲသင်၏နှလုံး၌မျက်စိကွယ်ကြပါနဲ့?
8:18 မျက်စိရှိခြင်း, သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ကြဘူး? နှင့်နားရွက်ရှိခြင်း, သငျသညျနားမထောင်ကြဘူး? သငျသညျသတိရမနေပါနဲ့,
8:19 ငါငါးထောင်တို့တွင်ငါးမေတ္တာဖဲ့သောအခါအ, မည်မျှခြင်းတောင်းကိုသင်ချီအပိုင်းအစများနှင့်ပြည့်ဝ၏?"သူတို့ကသူ့ကိုအားဆို၏, "တကျိပ်နှစ်ပါး။ "
8:20 "သောအခါထိုခုနစ်ယောက်တို့သည်မုန့လေးထောတို့, သငျသညျမည်မျှတောင်းအပိုင်းအစများ၏တက်ယူခဲ့ပါ?"ထိုသူတို့ကလညျး, "ခုနှစ်။"
8:21 ထိုသူတို့အားဆို၏, "ဘယ်လိုကြောင့်သင်ရသေးနားမလည်ကြဘူးဆိုတာပါပဲ?"
8:22 ထိုသူတို့ကဗက်ဇဲဒမြို့သို့သွား၏. ထိုသူတို့ကသူ့ကိုတစ်ပင်မျက်စိကန်းသောသူကိုယူဆောင်. ထိုသူတို့ကသူ့ကိုအသနားခံ, သူကသူ့ကိုမထိမယ်လို့ဒါ.
8:23 ထိုအခါလက်ဖြင့်မျက်စိကန်းသောသူကိုယူပြီး, သူကရွာကိုကျော်လွန်ပြီးသူ့ကိုဦးဆောင်. နှင့်သူ၏မျက်စိပေါ်မှာတံစို့ချပြီး, သူ့အပျေါမှာလကျကိုတငျ, သူကဘာမှမကြည့်ရှုနိုင်ပါလျှင်သူ့ကိုမေးခဲ့တယ်.
8:24 ထိုအတက်ရှာဖွေနေ, ဟုသူကပြောသည်, "ကျွန်မယောက်ျားတွေ့မြင်ဒါပေမဲ့သူတို့သစ်ပင်များလမ်းလျှောက်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ "
8:25 နောက်တစ်ခုသူသည်မိမိမျက်စိကျော်နောက်တဖန်မိမိလက်တင်လိုက်တယ်, သူကြည့်ဖို့စတင်. ထိုမင်းသည်ပကတိဖြစ်လေ၏, သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရာအားလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်အောင်.
8:26 ထိုမင်းသည်မိမိအိမ်သို့စေလွှတ်တော်မူ, ဟုဆို, "သင်၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်တော်သို့ Go, သင်မြို့တံခါးအထဲသို့ဝင်လျှင်, အဘယ်သူမျှမပြောပြပါ။ "
8:27 ထိုအခါယရှေုသကဲသရိဖိလိပ္ပု၏မြို့ရွာသို့တပညျ့တျောတို့နှငျ့ထှကျသှားကွ. ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုလမ်းမပေါ်, သူသည်မိမိတပည့်မေးခွန်းထုတ်, သူတို့ကိုဟု, "လူငါဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူဆိုပါဘူး?"
8:28 ထိုသူတို့သညျဟုကလညျး: "ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်, အချို့ကဧလိယ, နေဆဲအခြားသူများ၏ပရောဖကျဖြစ်ကောင်းတယျ။ "
8:29 ထိုအခါသူတို့ပြောဆို, "ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်, ငါသည်သင်တို့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြ?"ပေတရုဟုအားဖြင့်တုန့်ပြန်, "ကိုယ်တော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြ၏။ "
8:30 ထိုသူတို့ကသတိပေးခဲ့, သူ့ကိုနှင့် ပတ်သက်. မည်သူမဆိုပြောပြရန်မဟုတ်.
8:31 ထိုမင်းသည်လူသားဖြစ်သောအရာများစွာကိုဆင်းရဲခံရမည်ကိုသေသောသူတို့ကိုသွန်သင်ဖို့စတင်, နှင့်အသက်ကြီးသူတို့အားဖြင့်ငြင်းပယ်ခြင်းကို, အမြင့်ဆုံးသောယဇ်ပုရောဟိတ်အားဖြင့်, နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့, အသေသတ်ခြင်းကိုခံရ, သုံးရက်အတွင်းပြီးနောက်နောက်တဖန်မထ.
8:32 ထိုမင်းသည်ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်စကား. ထိုအခါပေတရု, သူ့ကိုဘေးဖယ်ယူပြီး, သူ့ကိုပွုပွငျဖို့စတင်.
8:33 ထိုအလှည့်ကိုပယ်နှင့်သူ၏တပည့်မှာရှာဖွေနေ, သူကပတေရုကသတိပေးခဲ့, ဟုဆို, "ငါ့နောက်သို့ Get, ရာသူ့ကိုစာတန်, သင်သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏သောအရာတို့ကိုကြိုက်တတ်တဲ့မ, ဒါပေမယ့်ယောက်ျားသားဖြစ်ကြ၏သောအရာတို့ကို။ "
8:34 တပညျ့တျောတို့နှငျ့အတူလူအစုအဝေးတို့သည်အတူတောင်းဆိုထားတဲ့, သူတို့ပြောဆို, "မည်သူမဆိုငါ့နောက်သို့လိုက်ရန်ရွေးကောက်ပြီးဆိုပါက, သူ့ကိုဖြင့်ကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ကြကုန်အံ့, နှင့်မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုတက်ယူ, ငါ့နောက်သို့လိုက်.
8:35 မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့ရှေးခယျြခဲ့ကြလိမ့်မည်အကြင်သူသည်များအတွက်, ရှုံးလိမ့်မည်. အကြင်သူသည်မိမိအသက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်, ငါ့အဘို့အလိုငှါဧဝံဂေလိတရားနှင့်အများအတွက်, ဒါကြောင့်ကယ်တင်တော်မူမည်.
8:36 ဘယ်လိုလူတအကျိုးခံစားရပါဘူးများအတွက်, သူတစျလောကလုံးသို့ရောက်တတ်သောလျှင်, and yet causes harm to his soul?
8:37 သို့မဟုတ်, what willaman give in exchange for his soul?
8:39 ထိုသူတို့အားဆို၏, "အာငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, that there are some among those standing here who shall not taste death until they see the kingdom of God arriving in power.”